Kedu ihe Ntanetị Oge Na-aga (JITM) na Gịnị Mere Ndị Ahịa Ji Agba Ya? | Martech Zone
Mgbe m rụrụ ọrụ na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ, naanị-na n'ichepụta ihe ama enen̄ede ama. Akụkụ nke ekele ahụ bụ na ị ga-ebelata ego ejikọtara na ngwaahịa na nchekwa, ma na-agbasi mbọ ike iji kwadebe maka ọchịchọ. Data bụ akụkụ dị mkpa, na-ekwusi ike na anyị agaghị agabiga ngwa ahịa anyị chọrọ mgbe anyị nwere ike ịdị na-agbanwe agbanwe wee zute ihe ndị ahịa anyị chọrọ.
Dika data ndi ahia bara uba karia ka ha bia na ahia, ulo oru nwere ike iji otu nkenke ahia ha. Kedu ihe kpatara ịmepụta kalịnda ọdịnaya afọ nke nwere ike ghara ịdị na-adị n'ime ọnwa ole na ole? Ahịa Agile mgbalị na-enye ohere ịme mgbanwe mana ka hụkwa na etinyela atụmatụ azụmaahịa ogologo oge yana ebumnuche.
Kedu ihe bụ Just In Time Marketing?
Naanị oge ịre ahịa na-elekwasị anya n'ịmepụta ọdịnaya azụmaahịa dị mkpa, mgbe achọrọ ya, na ịkwado ya maka mkpa nke ndị ahịa nwere mmasị kpọmkwem mgbe ha nọ na ọnọdụ ịzụta. N'ụzọ dị iche, usoro ịre ahịa azụmaahịa gbadoro anya na imepụta ọdịnaya dị ukwuu iji ruo ndị na-ege ntị. Dabere na nyocha ahụ, atụmatụ a na-egosi na ọ ga-adị obere ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ịga nke ọma, dị ka ndị CMO kwuru na ihe dịka pasent 20 nke ndị ahịa a ruru nwere mmasị na ngwaahịa a kwalitere ma ọ bụ nwee ike ịzụta ya. Mkpakọrịta mmekọrịta
Mkparịta ụka Accenture gosipụtara 38% nke ụlọ ọrụ ndị dị ka ndị na-ere ahịa oge na-etolite ego ha na-enweta kwa afọ karịa 25% ma e jiri ya tụnyere naanị 12% nke ndị ọgbọ ha. Ha dịkwa n'ihu usoro ahụ gbasara ikike ndị a:
Ihe ojoo - 82% kwuputara nnukwu mbọ iji belata adịghị ike #marketing
Mgbanwe mgbanwe nke oge kwesịrị ekwesị - 57% nwere afọ ojuju maka ikike ha nwere iji soro ndị na-azụ ahịa kerịta ozi ziri ezi n’oge kwesịrị ekwesị
Ike ịmepụta nghọta ndị ahịa - 87% nwere ndị ọrụ nwere ọrụ nyocha pụrụ iche iji zụlite nghọta ndị ahịa bara uru
Nchịkọta dijitalụ dị elu - Naanị ụlọ ọrụ azụmaahịa anaghị ewepụ mbọ azụmaahịa dijitalụ na ndị ahịa ahịa ha ndị ọzọ, dịka 58% kọwara atụmatụ dijitalụ na nke ọdịnala #marketing dị ka nnukwu agbakọ
Nnwere onwe na teknụzụ - 58% kwuputara nnwere onwe zuru oke mgbe ọ na-abịa ịme mkpebi ntinye ego IT - na-egosi na mmekọrịta CIO-CMO etolitela na-arụkọ ọrụ ọnụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa naanị oge.
Naanị Oge Inye Aka na-aghọwanye omume a na-ahụkarị, dị ka a hụrụ na nchọpụta Accenture Interactive a.
Site na ịmalite ime ihe n'oge, anyị na - ahụ ka ndị otu na - ere ahịa ga - emepe uru nke tọrọ atọ ma ọ bụ enweghị ike inweta. Uru a bara ụba sitere na ikike ndị na-ere ahịa n'oge na-eme ka ndị ahịa tinye aka na oge achọrọ ma zere ịla n'iyi. Paul Nunes, onye isi njikwa, Accenture Institute for High Performance.
Nzọụkwụ dị mkpa n'okporo ụzọ iji zụọ ahịa naanị oge
Ndi otu ahia choro igbanwe oge-na-oge òtù dị iche iche kwesịrị ịtụle ndụmọdụ ndị a:
Na-ebuli arụmọrụ. Mezie arụmọrụ ma zụọ ndị mmadụ ka ha mezuo ngwa ngwa; iji mee ihe n'ụzọ amamihe ma dịkwuo nimble; ịtụtụkọta nghọta ma tụgharịa ha n’ụbọchị ma ọ bụ n’izu, ọ bụghị n’ọnwa. Tinye talent na mkpebi dị nso na akara ihu, kpokọta nghọta ma mee ha. Mee ka usoro ochichi gị dị elu ma jide n'aka na ị maara onye ga-aza ajụjụ ma na-ahụ maka mkpebi ọ bụla, na-ewepụ usoro usoro na aka mgbe enwere ike.
Bụrụ “onye na-ege ntị” dị irè. Gee ntị na mgbasa ozi mmekọrịta maka ịme ihe iji mee ihe ozugbo, ma nwekwuo ntụsara ahụ site na iji data na-enweghị usoro iji mee mkpebi dabere na ngụkọta nke nghọta na ọmụma sitere na data.
Dozie maka ndị ndu na-egosi ọ bụghị naanị maka igwe mmadụ. Debe nyocha nke nyocha na mmekọrịta onye ọ bụla yana usoro mgbasa ozi sara mbara dị ka ụzọ isi nweta ogo zuru oke n'etiti mmekọrịta ndị ahịa. Ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa iji gwa ndị mmadụ okwu taa, kamakwa ịtụle ndị na-ebu amụma maka etu ụkpụrụ ga-adị n’ọdịnihu.
Tags: AccentureMkpakọrịta mmekọrịtacioKedunghọta ndị ahịanjikọta dijitalụmgbanwemwekotajitmnaanị n'ogeNaanị ahịana-eduga na-egosina-ege ntịegeahia mgbanwenjikarịcha ahịaahihia ahianjikarịchapaul nunesn'efu
Jun 15, 2016 na 8:50 AM
Atụmatụ dị mma!